Sida Loogu Hormariyo Waxqabadka Kooxdaada iibka | Martech Zone
Jimco, Febraayo 10, 2017 Jimco, Febraayo 10, 2017 Douglas Karr
Inbadan oo asxaabteyda ah waa dad iib weyn. Run ahaantii si daacad ah, weligay si buuxda uma ixtiraamin shaqadooda ilaa aan ka bilaabay ganacsigeyga oo aan ku qaatay toorey. Waxaan la yeeshay dhagaystayaal aad u wanaagsan, cilaaqaad adag oo lala yeeshay shirkado i ixtiraama, iyo adeeg weyn oo ay u baahnaayeen. Midkoodna arrintaasi ma ahan tan labaad waxaan ka soo galay albaabka si aan ugu fadhiisto fadhi iib ah!
Waxba iskama aan qaban sidii aan isku diyaarin lahaa isla markiibana waxaan isku arkay dhibaato. Waxaan bilaabay inaan tababaro la yeesho tababaraha aniga i hoos geeyay garabkiisa, oo i bartay iyo waxa aan ku fiicanahay, ka dibna wuxuu iga caawiyay inaan abuuro istaraatiijiyado qaas ah oo aan ku qanacsanahay markii aan ku sii gudajiro ka qaybgalka iibka ee rajada. Waxay bedeshay ganacsigeyga, hadana waxaan daawadaa iibiyaasha waaweyn ee igu hareeraysan anigoo ka baqaya sida ay u daba socdaan heshiisyada xiritaanka.
Maalin maalmaha ka mid ah, waxaan rajeynayaa inaan shaqaaleysiiyo koox wax iibisa. Maaha inaanan rabin hadda - laakiin waxaan ogahay inaan u baahanahay inaan helo albaabka qofka saxda ah ee naga caawin kara inaan gaadhno awoodeena. Waxaan daawadaa shirkado badan oo shaqaalaysiiya, wareejiya, isla markaana shiidaal ka qaata shaqaalaha iibka ee khibrad la'aanta ah mana mari karo wadadaas. Waxaan dooneynaa inaan bartilmaameedsanno oo aan helno shirkadaha saxda ah ee aan la shaqeyn karno, ka dibna aan helno qof leh aqoon ku filan oo albaabka looga soo jiido.
Kuwa idinka mid ah ee ku jira kooxda iibka, sawir-gacmeedkan oo ka socda Dhismaha Ganacsiga Caafimaadka leh ayaa bixiya 10 Dariiqo oo Lagu Hormariyo Waxqabadkaaga Iibka.
Waxtar la'aantu waxay hoos ugu dhici kartaa ganacsigaaga waxayna u horseedi kartaa cawaaqib xumo haddii aan si dhakhso leh wax looga qaban. Infoggarahan, waxaan ka wada hadli doonnaa siyaabaha kala duwan ee ku saabsan sida aad u sii wanaajin karto waxtarka kooxdaada iibka ah si ay meheraddaadu ugu sii socoto inay baraarto oo ay horumar ku gaadho maanta iyo sannadaha soo socda.
10 Dariiqo oo Lagu Hormariyo Waxqabadkaaga Iibka
Sii adag tababarka iyo dabagal.
Iskuday kooxdaada iibka.
Ogow furaha xooga xubin kasta oo kooxda ka mid ah.
Qabo iibiyaashaada xisaabtan.
Sii kooxdaada iibka wax weyn data.
Samee joogto ah hal-hal-hal baxyada.
A aragtida guud macaamiishaada.
Ha badinin injineernimadaada habka iibka.
Hirgelinta hagaajinta barbaarinta iyo dhibcaha hogaanka.
Hubso in iibka, adeegga macaamiisha, iyo suuqgeynta ay yihiin toosan iyo isku dhafan.
Tags: dhise ganacsi caafimaad qabasida loohagaajinta iibkaKordhinta Iibkaiibka infographicwaxqabadka iibkahabka iibkatababarka iibkaiibinta